लकडाउनले तपाई र तपाईको कृयाकलापको राम्ररी अध्यायन गर्ने मौका मिल्यो। जसअनुसार तपाई आफ्नो अपार बोल्ने कला प्रयोग गरेर 'होलाई होइन, होइनलाई हो' पनि बनाउन सक्ने, थोरै पढेर पनि धेरै पढेको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने, राजनीतिमा लागेर पनि कलाकारले भन्दा धेरै मान्छे हँसाउन सक्ने, यिनै आफ्ना कलालाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दै देशको प्रधानमन्त्रीसम्म हुनुभयो।
यसरी नियाल्दै जाँदा मलाई लाग्यो तपाई हदै टाठो मान्छे हो, तर बुद्धिमान होइन। किनकी बुद्धिमान मानिसले जाने/बुझेको कुरा मात्र बोल्छ। जानेको काम मात्र गर्छ। सल्लाह लिन्छ। सोध्छ। धेरै सिक्नुछ भन्ने ठान्छ।
तर मात्र टाठो मान्छे सबै काममा अग्रसर हुन्छ। सबै जान्दछु भन्छ। मैले सिक्नु केही छैन, सब आउँछ भन्छ। घमन्ड गर्छ। क्षणिक प्रभाव जमाउँछ। कालान्तरमा आफू र वरपरका अन्धभक्त विश्वासीहरु सबैलाई डुबाउँछ।
यसरी उ लड्न पुग्छ। लडेपछि पुन: उठेर मान्छेहरु सामु बठ्याई झिक्दै आफ्नो प्रभाव जमाउन थाल्दछ। यस प्रकार उसको जीवन बित्दछ। त्यसैले तपाई टाठो त हदै टाठो तर बुद्दिमान होइन।
त्यस्तै तपाई ज्यादै आत्मविश्वासी पनि हो। फेरि आत्मविश्वास पनि दुई प्रकारका हुन्छन्। पहिलो, ज्ञान सहितको आत्मविश्वास। दोस्रो, ज्ञानरहित घमन्डले जगाउने आत्मविश्वास। तपाई दोस्रो प्रकारमा पर्नु हुन्छ।
ज्ञानरहित घमन्डले जागेको आत्मविश्वासी मान्छेले हुने/नहुने सबै कुरामा डिफेन्स गरिरहन्छ। लाज मान्दैन। उसमा नैतिकता हुँदैन। सनक्क सन्किन्छ। फुरूक्क फुर्किन्छ। मान्छेलाई तर्साउँछ। भ्रममा राख्छ। त्यसैले तपाई दोस्रो प्रकारको आत्मविश्वासी मान्छे हो।
प्रधानमन्त्री ज्यू! आजसम्म आइपुग्दा तपाईले त धेरै नै कान्डहरु घटाउँदै र पचाउँदै आउनुभयो। तर के जनताले पचाउन सकेका छन् त? ख्याल गर्नु भएको छ? पक्कै छैन। ज्ञानरहित आत्मविश्वासी, अनि बोक्रे टाठो नभई बुद्दिमान अनि नैतिकवान् हुनुहुन्थ्यो भने सुरुका एक/दुई कान्डमा नै तपाईले राजिनामा गरिसक्नु हुन्थ्यो।
तर आज भयानक दसौँ-पन्ध्रौँ कान्डहरूले पनि तपाईलाई छुन सकेको छैन। हल्लाउन सकेको छैन। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आफ्नो पार्टीको झन्डै २/३ बहुमत सहितको प्रधानमन्त्री तपाई स्वयं भइराख्नु भएको बेलामा राजनीतिक स्थायीत्वको लागि भनेर ७० वर्षदेखि लडेर ल्याएको संविधानलाई एउटा बच्चाले आफ्नो होमवोर्क डायरी केरमेट गरे जस्तो ठानी यतिसम्म गैरजिम्मेवार बन्दै आफ्नो निक्रिस्ट स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने तपाईले नैतिकताकै चिरहरण गरिसक्नु भएकोले तपाईसँग नैतिकता भन्ने चिज डराउँछ रे।
त्यो नेपालबाट भागेको छ रे। तपाई प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेसम्म नैतिकता नेपालमा आउँदैन रे। त्यसैले प्रधानमन्त्री ज्यू छिटो राजिनामा गर्नुहोस् रे।
प्रधानमन्त्री ज्यू, कोभिड-१९ ले संसारलाई आक्रान्त पारिराखेको बेलामा देशका हामी सम्पूर्ण जनता घरघरमा बन्दी भई भयभित अवस्थामा रहेको अनि पूरा देश नै ठप्प भएको बेलामा, कोरोना कहरबाट कहिले छुट्कारा पाइएला भन्दै प्रधानमन्त्री ज्यूबाट पक्कै पनि कुनै उच्चस्तरका योजनाहरु बनिरहेकै होलान भन्ने आशा गरिराखेको परिवेशमा थियौँ।
तर तपाई त यस्तो बेला पार्टी फुटाउन भनि रातारात काठमाडौँदेखि जनकपुरसम्म, लकडाउनको बेलामा आफ्ना केही सभासद र पूर्व-प्रहरी अधिकृत सहित पठाई, समाजवादी पार्टीका केही सभासदहरुलाई अपहरणको शैलीमा काठमाडौँ ल्याई, होटेलमा थुनेर राख्ने जस्ता कर्तुत, अझै भन्नु पर्दा गणतन्त्रमाथि नै प्रहार हुन सक्ने देशद्रोही अभियानमा पो व्यस्त हुनु भएको रहेछ।
यी कुराहरु पर्दाफास भएपछि त हामी जनता अब कोरोना भाईरससँग भन्दा रक्षकको नाममा भक्षक तपाईसँग पो धेरै डराएका छौँ। यी त समुन्द्रमा देखिने हिमशिलाको टुप्पो जस्तो केही अंश मात्र हुन्। सुरुदेखिका विभिन्न कान्डहरु यहाँ समावेश गरेर साध्य छैन।
प्रधानमन्त्री ज्यू, हालसालै मात्र बिचल्लीमा परेका जनतालाई राहात बाड्ने व्यक्तिहरुलाई लकडाउन तोडेको आरोपमा थुन्नु भएको छ रे, तर काठमाडौँदेखि जनकपुरसम्म सभासद लिन गएका तपाईका मान्छेलाई त लकडाउन् तोडेको र अपहरण गरेको कुनै पनि केस लागेको छैन रे।
त्यसैले नैतिकतालाई नेपाल आउन मन त लागेको छ रे। तर तपाई प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेसम्म नैतिकता नेपालमा आउँदैन रे। त्यसैले प्रधानमन्त्री ज्यू, छिट्टै राजिनामा गर्नुहोस् रे।
प्रधानमन्त्री ज्यू! सोचेको जस्तो भयो कि भएन? जहाँसम्म लाग्छ भएको छ। टिम राम्रो रहेछ। तपाई त ज्यादै टाठो मान्छे, पहिल्यैबाट देश चलाउने राम्रा मान्छेहरू तयार गरिराख्नु भएको रहेछ। त्यसैले तपाईलाई बेसी नै सफलता मिलेको हुनुपर्छ।
ठाउँ-ठाउँमा एजेन्टहरूले अलि गोपनियतामा ध्यान पुर्याउन नसके जस्तो लाग्यो। तैपनि ठिकै छ, डिफेन्स राम्रै गरिरहेका छन्। जनता सबै सुतेरै खाइरहेका छन्। नपुगेकालाई एजेन्टहरूले बाँडिरहेका छन्। आ-आफ्ना घर परिवारमा पनि सप्लाई गरिरहेका छन्।
देश शान्त छ। राहतका समान तपाईका एजेन्टलाई नबुझाई बाठो भएर आँफै बाँड्न गएकाहरुलाई एजेन्ट र सुरक्षाकर्मी मिलेर ठेगान लगाएकै छन्।
प्रधान्मन्त्री ज्यू! बिना शिक्षा, बिना सम्पत्ति, झापाको गाउँको एउटा बुकुरो घरबाट निस्किएर, मोहनचन्द्र र राधाकृष्णहरुले दिएका २/४ पैसाले पेट पाल्दै, एउटा चुरोट तीन पटक निभाउँदै तानेर, दिनचर्या व्यतित गर्दै आएको व्यक्ति, तपाईले त तमासा नै गरिसक्नु भएको छ।
यति लामो समयसम्म आफ्नो सक्कली अनुहार सर्लक्क ढाकेर, यहाँसम्म आईपुग्न सफल हुनुभयो। यो नै तपाईँको सबैभन्दा ठुलो सफलता हो। अब के सोच्नु भएको छ? असली रूप उजागर भएजस्तो छ। अब बल नगर्नुहोस्।
हिजोका दिनमा अरूले गणतन्त्र ल्याउने कुरा गर्दा 'वयलगाढा चढेर अमेरिका पुगिन्छ?' भनेर हकार्ने तपाई, फेरि त्यही गणतन्त्रमा हालिमुहाली गर्ने पनि तपाई। देशलाई मिठोसँग आँप चुसेझैँ चुसिसकिएको छ। अब बाँकी कोया कोपर्न खोज्दा तितो भेटिएला।
त्यसैले अब, केही दु:ख मनाउ गर्नु पर्दैन। भविष्यमा जेल जान नपर्ने कामना गर्नुहोला। ग्रहले पनि अध्यादेशसम्म आईपुग्दा नराम्रोसँग हानेको छ। मान्छेले नहानीदिए हुन्थ्यो। राष्ट्रपतिले पनि पाँचै मिनेटमा अध्यादेश स्वीकृत गरिदिनु भएछ।
एक-दुई दिन समय लगाएको भए फिर्ता लिनु पर्दैन थियो कि? विचरा हजुरको काम बिग्रिएला भनेर त्यति छिटो गरिदिनु भएको होला। उहाँलाई पनि के दोष दिनु र?
अब, यस पटकलाई हजुरको काम पुगेको जस्तो छ। अर्को चुनावमा पहिलेको भन्दा खतरा कामहरूको सूची लिएर जानु होला। पहिलाको चुनावमा कामका सूचीहरु अझैं कम भएछन्। सरकार बनाएको दुई महिनामै सबै पूरा गरेर सकियो क्यार।
सूचीमा राखिएका गर्न पर्ने काम सबै तमाम गरिसकेपछि तेस्रो महिनाबाट कान्ड नै कान्ड मच्चिन थाले। त्यसैले पोहोरको चुनावमा छुटेको एउटा कुरा अब आउने चुनावमा नछुटाउनु होला कि, ५ वर्षभित्रमा सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई चन्द्रमामा बसोबास गराईसक्ने छु।
जाबो रेल, घर-घरमा ग्याँसको पाइपलाइन, पानी जहाज ल्याउने जस्ता कुराले त यहाँसम्म पुर्यायो। यति धेरै भोट आयो। अब चन्द्रमामा वस्ती नै सबै सार्दिन्छु, अमेरिका, चाइना सबलाई हेरेको हेरै पार्दिन्छु अनि देख्नेछन् नेपालको शक्ति भनेर यति कुरा जनताको सामु राख्दा त कहाँ पुगिएला? कति भोट आउला?
प्रधानमन्त्री ज्यू! अब योभन्दा धेरै गन्थन गर्न चाहिन। अर्को चुनावको लागि त्यति भनेपछि हजुर सुरक्षित हुनु हुनेछ। अहिलेलाई देशमा नैतिकता भित्र्याउनै पर्ने अवस्था छ। तर तपाईं प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेसम्म नैतिकता नेपालमा आउँदैन रे। त्यसैले प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाईले तुरून्तै राजिनामा गर्नुहोस् रे।
हवस् त! उही तपाईंलाई चुनाव जिताउने बेला विपक्षीबाट कुटाई खाने तपाईकै रैती।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख १८, २०७७, ०३:०२:००